Arzantina dia firenena manana tantara manankarena, manintona ny natiora ary biby hafa. Fianakaviana maro no niely tao amin'ny faritaniny, ary nosoloina tsirairay ny taranaka koloista. Izany rehetra izany dia namela fananganana goavana tsy avy amin'ny tantara sy ny toekaren'ny firenena, fa koa amin'ny endriny ara-kolotsaina. Tsy mahagaga raha maro ny tarehimarika voajanahary 10 sy teratany ao Arzantina no nampidirina tao amin'ny lisitry ny lovan'ny World UNESCO.
Lisitry ny tranokala eran-tany any Arzantina
Misy sehatra ara-kolontsaina enina ara-kolotsaina sy efatra voajanahary ao amin'ny firenena. Ary tena ara-dalàna ny fanjakana, izay feno fahasamihafana amin'ny tenany.
Amin'izao fotoana izao, ireto tranonkala manaraka ao Arzantina ireto dia tafiditra ao anatin'ny lisitry ny herin'ny UNESCO:
Jesuit missions hita any amin'ny tanin'ny Guarani Indians ;
Cueva de las Manos ;
ny Saikinosin'i Valdez ;
ny valan-javaboahary Ischigualasto ;
ny faritanin'i Jesuit sy ny iraka tany Cordoba ;
ny Kebrada de Umauaca ;
ny lalam- panorenana Andean Khapak-Nyan ;
Ireo rafitra maodelin'ny mpanao mari-trano Le Corbusier .
Ny lanja voajanahary voajanahary, ara-kolontsaina ary ara-tsakafo
Andeha hojerentsika hoe inona no lanjan'ireo angano Arzantina ao aminy ary nahoana izy ireo no nomena voninahitra tamin'ity lisitra ity:
Park Los Glaciares no tanjona voalohan'ny firenena voatanisa. Izany dia nitranga tamin'ny taona 1981. Ny velarantanin'ilay tanàna dia 1 500 metatra. km. Fiaramanidina lozam-pifamoivoizana goavam-be izy io, ny ranon'izy ireo dia miaro ny ranomandry kely kokoa, ary avy eo mikoriana mankany amin'ny Oseana Atlantika.
Ny faharoa amin'ny lisitr'ireo tranonkala Erôpita eran-tany ao Arzantina dia nanao ny asa fitoriana ao Jesuit , any amin'ny faritry ny foko Indiana ao Guarani. Anisan'izany:
San Ignacio Mini, naorina tamin'ny taona 1632;
Santa Ana, izay napetraka tamin'ny taona 1633;
Nuestra Señora de Loreto, naorina tamin'ny taona 1610 ary nandringana nandritra ny ady teo amin'ny Jesuit sy Guarani Indians;
Santa Maria la Mayor, naorina tamin'ny taona 1626.
Ireo zavatra rehetra ireo dia mahaliana amin'ny filazany ny tantaran'ny fiparitahan'ny misiona Jesuit any amin'ny faritanin'i Arzantina. Ny sasany amin'izy ireo dia ao anatin'ny toe-javatra tena tsara, fa ny sasany kosa dia tsy afaka ny hitazona ny endriny voalohany.
Tamin'ny taona 1984, ny Valan- javaboarin'i Iguazu , any avaratr'i Arzantina, dia nampidirina tao amin'ny lisitry ny Lovam-pandevenan'ny UNESCO. Ny renirano dia voahodidin'ny ala mikitroka, izay ahitan'ny zavamaniry 2 000 maniry ary mihoatra ny 500 biby sy zavamaniry.
Ny Cueva de las Manos dia anisan'ireo lisitra tamin'ny taona 1999. Fantatra amin'ny sary sokitra misy sarin-drakitra izy io. Milaza ny mpikaroka fa ny ankizilahy no mivaona. Ny fanaovana sary dia anisan'ny fombafomba fanombohana.
Tamin'ny taona 1999 ihany, ny valan-tsambo Valdez tao amin'ny morontsirak'i Atlantika any Arzantina dia ohatra iray amin'ny tranokalan'ny lova eto Arzantina. Faritra tsy voakitika izy io, izay fonenana ho an'ny tombo-kase, tombo-kena elefanta ary biby mampinono hafa.
Tamin'ny taona 2000 dia nihalehibe ny lisitry ny valan-tseran'i Talampay sy Ischigualasto . Izany dia faritany fantatry ny fasika, vato mahatsikaiky, petroglyphs ary biby hafahafa.
Tamin'io taona io ihany, nanampy ireo tranokalam-piarahamonina eran-tany ao Arzantina ireo asa fitoriana ao Jesuit sy tranobe ao Cordoba . Ity antokom-pananganana ity dia ahitana:
National University (Universidad Nacional de Cordoba);
Famerenana ny fananganana ny Jesuit;
ny fiangonana jesuite tamin'ny taonjato faha-17;
Ny tranon'ny Quebrada de Umouaca ao Arzantina dia nanjary toerana lovan'ny taona 2003. Izy io dia manondro lohasaha malaza, izay nandritra ny fotoana ela dia toerana misy ny làlana karavasy. Ity dia karazana "Road Silk Road", izay miorina any amin'ny faritra atsimo atsimo.
Ny lalam-panorenana Andean Khapak-Nyan dia ahitana lalam-pidirana be dia be izay natsangan'ny Incas tamin'ny vanim-potoan'ny kolontsaina Indiana. Tsy nijanona afa-tsy tamin'ny fahatongavan'ny mpandresy Espaniola ny fanorenana lalana. Ny totalin'ny halaviran-dalana dia 60.000 km, fa amin'ny 2014 ihany, ireo sehatra izay voatahiry tsara kokoa noho ny hafa dia tafiditra ao anatin'ny lisitra.
Hatramin'izao, ireo zavatra farany ao Arzantina, izay tafiditra ao amin'ny lisitry ny lovan'ny World UNESCO, dia rafitra ara-javakanto ao Le Corbusier . Mpanao maritiora sy mpanakanto fanta-daza izy, izay nanjary mpanorina ny modernism sy ny fonctiona. Ny rafitra misy azy dia miavaka amin'ny fisian'ireo vato lehibe, tsanganana, tafo fisaka ary rindrina mihetsiketsika. Maro amin'ireo singa hita any amin'ny fananganana maoderina, no noforonin'io zavaboary io.
Ny tsangambato ara-javakanto sy ara-boajanahary, izay ohatra iray amin'ny tranokalan'ny tany eran-tany ao Arzantina, dia voaaro amin'ny lalàna manokana ao amin'ny firenena. Natao tamin'ny 23 Aogositra 1978 izany. Tokony horaisina ho an'ireo mpizahatany izay tsy mahafantatra hoe aiza ny tranokalam-piarahamonina eran-tany ao Arzantina, ary ny fomba tokony hitondrany azy ireo.
Ho an'ny 2016 dia misy toerana 6 hafa izay azo sokafana amin'ny ho avy.
Ryazhenka ao an-trano
Fiangonana ao an-trano - recipe
Fanatanjahana ny maso mba hanatsarana ny fahitana
Ahoana no handoavana ny menaka fisakafoana?
Grandorf amin'ny saka
Fitrandrahana gazy natsangana
Millet - toetra mahasoa sy fanoherana
Modely vaovao amin'ny akanjo 2015
Ahoana no fandaharan'i Kate Middleton ny fotoanany?
Robbie Williams dia nanambara ny famoahana ilay rakikira vaovao, nihanika nihetsika teo amin'ny hazo iray
Mihinana aloha vao teraka